အများစုကဥရောပမြို့များကိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တုံဘောလုံးအားဖြင့်ကျူးကျော်ကြပြီ။ သင်ဤအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းအတွက်အဆင့်တိုင်းအတွက်အပေါငျးတို့ဘောလုံးပေါက်ကွဲဖို့ SpongeBob ကိုကူညီပါ။
မယားငါတကယ်ကြိုက်တယ် somehing ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏မိခင်အဘို့အအချို့သောလှပသောသံပုရာမယားပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ဖို့ရှိသည်။ အဲဒီမှာကဂိမ်းထဲမှာအများအပြားခြေလှမ်းသည်နှင့်သင်လျင်မြန်စွာတို့ကိုကျင့်ရန်ရှိသည်။
ပိုပြီးကျောင်းမှာပိုစာအုပ်တွေမျှမရှိသေးပါ, ဒီမိန်းကလေးပူပြင်းတဲ့သစ်ကိုကြည့်! ပွတ်တိုက်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်သူမ၏တစ်ခုလုံးကိုပုံပန်းသဏ္ဌာန် makeover ဖို့လုပ်-up,, ဆံပင်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်စရာ browse ပြီးတော့, ဒီ bookish သူငယ်ဆွတ်။ သင်ကမီနှင့်အပြီး pics ယုံကြည်မည်မဟုတ် ...
Attack animals on your farm as you manage your mana and health while being attacked.
သငျသညျမြို့၌ဤနာမည်ကြီးများနှင့်စည်ကားရေခဲမုန့်နန်းတော်ထဲမှာစာရေးအဖြစ်အလုပ်ရခဲ့တယ်။ A ကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်သင့်ရဲ့သူဌေးကိုသင်၏မျှော်လင့်သောနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အဆိုပါပေးပို့နောက်ဆုံးနေ့အတွက်ပြပွဲနှင့်သွက်လက်လာ။ Customer များအလွန်တောင်းဆိုနေတာနှင့်မနေကြ
သင့်ရဲ့ mouse ကိုအတူ surfer ကိုလမ်းပြ။ လေကြောင်းချီသွားကြဖို့ peaking လှိုင်းတံပိုးရိုက်ခတ်, ထို့နောက် position နဲ့ဆက်ဆံဖျော်ဖြေဖို့ left-click လုပ်ပါ။ ဆုကြေးငွေမှတ်ဆက်တိုက် position နဲ့ဆက်ဆံပယ် Pull ။ အတားအဆီးများရှောင်ကြဉ်ပါသို့မဟုတ်ကြောင့် dude, ကျော်ဂိမ်းပဲ!
ဂိမ်းဖော်ပြချက်: စစ်တိုက်ခြင်းငှါနှစ်ကြာပြီးနောက်သင်အကြွင်းအကျန်, အဖုတ်ကောင်သည်သင်၏တံခါးနားမှာဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့သည့်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးရပျတညျအပေါင်းတို့သည်ဖုတ်ကောင်ဖျက်ဆီးရမည်ဤသည်ကူကယ်ရာမဲ့အချိန်။ ဤရွေ့ကားဖုတ်ကောင်ကအလွန်အန္တရာယ်များသောဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေတစ်ခုတည်းကိုပစ်ခတ်၌သေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Angry Birds ဂိမ်းနဲ့ဆင်တူပေမယ့်ဂိမ်းခက်ခဲစေသည်သောဂိမ်း features တွေကင်းမဲ့။
Super Mario drive ကို
မာရီယို drive ကိုတစ်ဦး ATV အပေါ်တစ်ဦးမော်တာသို့မဟုတ် Mario အပေါ် Mario နှင့်အတူစီးနင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည် 10 အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ကြလိမ့်မည်နည်း အလွန်သတိထားပါနှင့်သင်တို့ရှိသမျှသည်စင်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရမှတ်တိုးမြှင့်နေရောင်ကိုစုဆောင်းပါ။
Click buttons and cause chain reactions to keep Snail Bob alive. Get him to the exit without dying.
Mario's Queen is waiting for Mario. Help Mario on Rocket to land safely at his Queen. Collect 20 coins everytime to get an extra life in this free online adventure game!
Click the blocks so the balls will fall in the right spot. Get all the balls to the green to roll into the green safety box.
စိတ်ကူးယဉ်ငြီးငွေ့? ထိုအခါ ON setting space ကိုလှည့်! သငျသညျ Adventures ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်မဟုတ်လော ထိုအခါရဲ့တစ်သေနတ်သမားကစားပါလေစေ! ဒီဂိမ်းသတ်မှတ်နှင့် YOU ကြိုက်သလောက်ကကစားရန်မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ သင့် Game ကစားသမား၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်ကိုရှေးခယျြအတွက်အရာအားလုံးကို။ ဒီခံစားကြည့်ပါ
This isafree online puzzle game with fruit theme, which requires the ability to use one's mind and hands.
အချပ်ခံတပ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး2သင်ခံတပ်ရဲ့ထိပ်သို့မဟုတ်အောက်ဆုံးရောက်ရှိမှသတ္တဝါများ၏လှိုင်းတံပိုးကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက် (သင်ဂိမ်းရဲ့ 20 အဆင့်ဆင့်တဆင့်တိုးအဖြစ် 19 သော့ဖွင့်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ငါးမရရှိနိုင်,) ယူနစ်၏အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောမျိုးအားမရဖြစ်ပါတယ်
ရစ်ခ်ယခုနှစ်ပေါင်းတူညီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်သူ၏လူထုံ Co-အလုပ်သမား Dave သည်းခံဖို့ရှိပါတယ်။ နေ့တိုင်း Dave က Rick ရဲ့ဘဝတစ်အိပ်မက်ဆိုးစေသည်! သို့သော်ရစ်ခ်လုံလောက်တဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်! ယနေ့အိုင်တီကောင်လေး၏မြင့်တက်လာပါ!
ben 10 စက်ဘီး Champ
ဘင် 10 စက်ဘီးစီး Champ ။ ဘင် 10 ဒါ့အပြင်သင့်အကြိုက်ဆုံး ben10 ဇာတ်ကောင်ခံစားကြည့်ပါရှေးခယျြနိုငျ ... နောက်ကျောဂြိုလ်သားဆန့်ကျင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးပိုပြီးမြန်နှုန်းအဘို့အ nitro သံဗူးကိုစုဆောင်း!
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂိမ်း၏ 21-12-2012 အဆုံး
ဒီနေ့ 21/12/2012 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာ၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မာရ်နတ်သည်နှိုးထနေပါတယ်။ သငျသညျသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရလိမ့်မည်။ ထိုအခါနေရောင်ကိုပြန်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏အဆုံး၏ human.The အကောင်းဆုံးဂိမ်းမှလာဆောင်ခဲ့ရမည်။
ben 10 ရေခဲခုန်
Ben10 ဂိမ်း, သင့်သူရဲကောင်းတယောက်ကိုတယောက်ရေခဲကနေခုန်ကူညီပေးပါတယ်။ အ ben10 ရဲ့ခုန်၏ညှနျကွားနှင့်အာဏာကိုထိန်းချုပ်ရန်သင့် mouse ကိုသုံးပါ။ ကံကောင်းပါစေ !
အများစုက Flash ကိုဂိမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့နောက်ခံ, ပိုကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်, တိကျမှန်ကန်သောရူပဗေဒနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပြည့်အဝဇာတ်စင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တကွ, ကမ်ဘာဦးသို့မဟုတ် SNES များအတွက် 16-bit နဲ့ဂိမ်းနဲ့တူပိုပြီးကြည့်ဖို့စတင်နေကြသည်။
Help Mario to shoot the incoming enemies.
အကစား field ရဲ့အခြားအဆုံးရောက်ရှိမှဒုစရိုက်တ္ထုကိုရပ်တန့်။